Leon Panetta Dilkii Hogaamiyihii Shabakada Al-Qaacida Osaama Bin Laadin Waxaa ka danbeeyay Dhaqtar u Dhashay Dalka... - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirka Gaashaandhiga dalka Mareykanka Leon Panetta ayaa u sheegay mid ka mid ah tv-yada ugu afka dheer ee SBS-news ee dalka Mareykanka, Leon Panetta ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday cidii gacanta weyn ka geysatay dilkii Osama Bin Laden.
Mr.leon Panetta ayaa sheegay in uu ka wal-wal qabo aayaha dambe ee dhaqtar Pakistani ah oo dalkiisa qiyaano qaran ka galay kadib markii uu dowladda Mareykanka ka caawiyay dilkii hogaamiyihii ururka al-qaeda ee usama bin laden.
sidoo kale panetta oo wareysi siinayay tv-ga SBS ayaa sheegay in dhaqtarkaasi oo lagu magacaabo Dr. shikal afradi oo dowladda pakistan xertay”runtii dhaqtarkaasi waxa uu u shaqeynayay hey’adda CID-da isagoo dadka isu tusaayay inuu baaritaano caafimaad u joogay magaaladii lagu dilay usama bin laden ee abbotabad ee gobolka al-sindi.
leon panett ayaa sidoo kale sheegay ‘aadbaan ugu wal wal sanahay waxa ay ka yeeli doonto dhaqtarkan dowldda pakistan oo aan dambi ku galin uu dalkiisa ku qiyaaneyay xogtii aadka u muhiim-saneyd ee ku saansaneyd howl-galkii lagu baadi-goobayay meeshii uu ku dhuumanayay usama bin laden.
hayeeshee dhaqtarkan lagu magacaabo shilkal afradi ayaa asahal ahaan ka soo jeeda magaalada abbotbad ee gobolka al-sindi waxaana uu wax ku soo bartay dalka mareykanka waxaana uu soo bartaycilmiga caafimaadka kana howl-gali jiray isbitaalka guud ee magaalada abbotbad.